Wasiiradii Xukumada Siilanyo Oo Ka welwelsan Mustaqbalkooda + Caqabadaha Ay Kala Kulmeen Iyo Hantidii Ay Ka Urursadeen Dawladii Hore Oo Ololihii Muuse Ka Raacday. | Baarcadeeye
Wasiiradii Xukumada Siilanyo Oo Ka welwelsan Mustaqbalkooda + Caqabadaha Ay Kala Kulmeen Iyo Hantidii Ay Ka Urursadeen Dawladii Hore Oo Ololihii Muuse Ka Raacday.
December 29, 2017 - Written by admin
Madaxweyne Cigaal ayaa 1996-kii ogaaday in ninkii Cabdalle ee Berbera Maayirka u ahaa uu guriga magaalada ugu ganjeelka weynna dhistay, bahal Eey ah oo Faras la moodana uu ku dhex rabbaystay, musuq iyo wax is daba marinna uu ka dhammaan waayey. Dabeeto intuu u yeedhay ayuu ku yidhi waar Cabdalle bal orod oo $100 kun oo dollar ii keen aan hawlo yaryar ku xalliyee, isna wuxuu ugu jawaabay Madaxweyne khasnnadda ba wax $20 kun gaadhaa kuma jiraan. Cigaal ayaa ku celiyey waar orod oo baaqiga meel uun ka soo amaaho oo la kaalay waynu iska bixin doonnaaye. Odaygii Cabdalle intuu big yidhi ayuu Boqolkii kun
dhowr meelood ka soo kala amaahday oo u keenay. Markii uu ka dhaqaaqay ayuu Ina Cigaal warqaddii eriska ka daba geeyey “Duca-qabe xilku waa meerto”. Ninkii haba la eryee lacag dayn ahna waa lagu jaray. Cadhadii maalintaa sidii uu gaadhi weyn oo Muqdisho u raran uu sii Fuulay, toban sanno ka dib 2006 ayuu Hargaysa ka soo degay, dabeeto TV-ga Qaranka oo markaa cusbaa ayuu ka soo muuqday isaga oo aad mooddo inuu tobankaa sannadood ba Isbaaro Xamar ku haystay, hadalladiisii waxaan ka xusuustaa “Madaxweyne Daahir Rayaale ayaan Cafis soo weyddiistay oo tigidhkana ii soo diray”.
Wasiirradii Xukuumadda Siilaanyana arrintaas oo kale ayaa ku dhacday. Xilligii Ololahii u danbeeyey ayuu maalin maalmaha ka mid ah Madaxweyne Siilaanyo Golahiisii Wasiirrada ku war geliyey in ay Berri Madaxtooyada isugu yimaaddaan si Musharraxii Kulmiye waa Muuse Biixiye uu khudbad ugu jeediyo. Dabeeto Cukuse maahane intii kale way soo xaadireen. Hadalladii faraha badnnaa ee uu subaxaa Muuse ku nuuxnuuxsaday waxa ka mid ahaa. “Horta kulankan inta soo ajiibtay way mahadsanyihiin inta ka maqanina way mahadsanyihiin, nimanyahow Maanta anigaa meesha taagan idinkuna Xukuumaddii ayaad tihiin, waxaan idiinka fadhiyaa in aad Ololaha ila gashaan, weliba waxaan idiin sheegayaa in aanan ballanqaadi karin in aan idin soo celinayo oo idin magaacaabayo waayo’ anba iima ballanqaadi kartaan inaad i soo saaraysaan oo Madaxweyne iga dhigaysaan, waxaan kale oo idiin sheegayaa in aanan nin qudha oo Wasiir ah lacag u dhiibayn oo ku odhanayn iigu soo ololee, bal se idinku jeebkiinnna ka bixiya kharashka aad igu taageeraysaan, haddii adduun aad leedihiin aydaan haysan, wixii aad Siyaadda ka dheefteen ba igu taageera oo iigu ololeeya”
Markii uu Muuse Biixi hadalkiisii dhammaystay waxa kacay Maxamuud Xaashi oo maalintaa garowsaday in aan wax la kala qarsadaa ba hadhin, illeen Siilaanyana wuu dhegaysanayaa dooddee. Wuxuuna hadalkiisii ku bilaabay. “Muuse Biixiyow waxaad tahay Musharraxayagii aan wadannay, waan ku garab istaagaynaa waan kuu Ololaynaynaa naf iyo maalna kaala hadhi maynno, xagga kharashkana anigu ka Wasiir ahaan iyo ka Madaxtooyada ahaan ba dib ayaannu isugu noqonaynaa shilinna kaala hadhi maynno”. Markii uu Maxamuud Xaashi go’aankaa qaatay ayay Wasiirradii kalena sidaa si la mid ah ku wada qanciyeen Muuse Biixi nin kastaana sidaas ayuu wixii uu Account ku leexsaday is yidhi Muuse u hur hadhow markuu Madaxweyne noqdo ha ku qaato oo ha ku magacaabee, qaarkoodna inta ay waxay hayeen u dhiibeen ayay weliba daynna u soo amaahdeen. Bal se umay fiirsan hadalkaa uu ugu celceliyey ee ahaa: “Ninkii aan adduun uu leeyahay igu darsanaynow wixii aad Wasiirnnimada ka faraqabsatay ba igu taageer oo iigu ololee”. Weedhahaas oo ahaa qorshe uu Muuse Biixi uga jeeday in dhaqaalihii ay Qaranka ka lunsadeen oo dhami uu kaga baxo Ololahan Kulmiye, hadhowna iyagoo caydh ah ayuu awel hore ba Siilaanyo Magacaabee, iyagoo Caydh ah in xilalka laga tiriyo oo suuqa lagu sii daayo, tiina way dhacday, weliba sidaa kaga muu hadhine wuxuu ku ifiyey toosh weyn oo talaata-xajar ah, isaga oo xilalkii uga wada qaaday si bilaa Karaamo ah, weliba mar kasta oo uu hadlana uu xuso musuqoodii ba’naa. Markaa waxay illaawi waayeen Kaarto-Millataridan lagaga faro maroojiyey Malaayiin Dollar oo ah hanti umadeed oo ay sir iyo caad ba u boobeen, bal se waxay illowsan yihiin in ay sidaa kaga baxeen saaxaddii oo aan sumcad ay siyaasiyiin ku sii ahaadaan ba jirin, bulshada dhexdeedana ay ka yihiin Tuke-baalcad. Dariiqa qudha ee u furani waa in ay Xabsiyadaa muuse hagaajinayo sugaan ama in ay Xamar iska aadaan Madaxweyneyaasha danbe ayaa Cafis u fidinayee.